Looks Nepal विप्लव नेतृत्वको चन्दा आतंक, गाउँपालिका अध्यक्षले नै बुझाए यत्रो रकम ! – Looks Nepal
विप्लव नेतृत्वको चन्दा आतंक, गाउँपालिका अध्यक्षले नै बुझाए यत्रो रकम !
Feb, 26, 2019	looksnepal
बुटवल । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले प्रदेश ५ का सबै नगर र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन पार्टीले जनसत्ता निर्माण गरी जनतामाझ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चन्दा दिन पत्राचार गरेको हो ।
पत्रबाहेक मौखिक रूपमा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै रकम छिटो उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरिएको छ । पत्रअनुसार धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ’बार्गे्निङ’ गरेर रकम बुझाएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
केहीले विकास बजेटबाटै र कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा रकम दिइसकेको जनाएका छन् । चन्दा दबाबमा वडाध्यक्षसमेत परेका छन् । यहाँका धेरै गाउँपालिका वडाध्यक्षले आम्दानीको स्रोतअनुसार ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छन् ।
विप्लवका तेश्रो वरियताका नेता सुदर्शन पक्राउ
एक सर्जनको गाथा लोकार्पण
कांग्रेस नेता हुमागांई, थापा र बस्नेत द्वारा राहत सहयाेग
प्रधानमन्त्रीः सिके राउतसँग नरम, विप्लवसँग गरम !
सिंगापुरको २ कराेड बरारबकाे स्वास्थ्य सामाग्री सहयाेग नेपाललाई
पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संचारकर्मि राजेन्द्र बांनियाकाे मन छुने चिठ्ठी
खतराप्रति सतर्क रहन सरकारलाई आग्रह